Nyko PlayPad, ulawulo olutsha lokudlala ngokuchaneka kwi-Android | I-Androidsis
Ukuthatha isakhelo se-E3 2012, umdlalo wevidiyo owenzeka kule veki kwisixeko saseLos Angeles, inkampani uNyko yabhengeza ukuveliswa kwezinto ezintsha abalawuli bezixhobo ze-Android, ngaloo ndlela uzama ukubonelela ngezisombululo ezintsha kubadlali abafuna ukuchaneka okubonelelwa ngolawulo lomzimba.
Nyko PlayPad kunye nePlayPad ProNjengokuba olu sapho lolawulo lubhaptiziwe, lujolise kwiimofiles ezineenguqulelo eziphezulu kune-Android 3.0 kunye neetshipsi I-NVIDIA TegraZizo ezo zihlala zinenkxaso eyiyo kwimidlalo yevidiyo kwaye ngokungathandabuzekiyo ziye zaba ziintandokazi zabaphuhlisi ukuze bakwazi ukusungula izihloko ezinamacandelo emizobo enomtsalane ngokwaneleyo ukukhuphisana nemidlalo yomdlalo wevidiyo.
Zombini iimodeli zePlayPad zibonakaliswa ngokuba nezinto ezisisiseko salo naliphi na isilawuli esifana iintonga ezimbini zeanalog, iD-Pad kunye noluhlu lwamaqhosha omzimba. Umahluko ophambili phakathi kokunye ulele kubukhulu bawo, ngelixa iPlayPad ifana nomlawuli we-SNES weklasikhi, umahluko wayo wePro uqheleke ngakumbi kumyalelo wekhonsoli yangoku enjenge-Xbox 360 kwaye ke ine-ergonomic engaphezulu. Kodwa ngaphandle koku, i-PlayPad nakwezinye iinguqulelo zayo ithembisa ukuphucula amava xa udlala izihloko ezifuna ukuchaneka okuphezulu njenge-FPS (Umntu wokuqala wokuThutha) kunye nayiphi na into kuhlobo lwesenzo.
Ewe kuya kufuneka linda ubuncinci kude kube kokwindla ukuze ukwazi ukufumana iPlayPad ezivenkileni, kuba ngalo mzuzu umhla wokwazisa kunye nexabiso alikaqinisekiswa. UNyko uqinisekisile ukuba ngesilawuli bakwacwangcisela ukubonelela ngesicelo esivumela ukongeza ukungqinelana kwimidlalo yakudala, kunye neenketho ezahlukeneyo eziya kuthi zivumele abadlali ukuba baqwalasele ubeko lwamaqhosha kunye nemisebenzi yabo ukuya kwelona liphezulu.
Iinkcukacha ezithe xaxe - Imidlalo eza kufika ngeTegra 3
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Imidlalo ye-Android » UNyko ulungiselela abalawuli abatsha kwimidlalo ye-Android